जनआन्दोलन जगाउने पत्रकार
२०७५ असोज २० शनिबार ०८:०८:००
स्तातकोत्तरसम्म पढेर पनि कहिल्यै जागिर खाएनन् । जिन्दगीलाई डोर्‍याउने कुनै ‘कंक्रिट’ योजना बनाएनन् । योजनाबिनै राजनीति गरे, योजनाबिनै पत्रकारिता थाले । योजनाबिनै समाचार लेखेर जनआन्दोलनको उभार उठाए । त्यो आन्दोलनले पञ्चायत ढाल्यो । मनमा सधैं ठानिरहे— प्रजातन्त्र आउनुपर्छ, बस् !
माथवरसिंह बस्नेतले समाचार लेखेकै कारण ०४६ सालको जनआन्दोलन शुरु भएको धेरैलाई थाहा छैन । त्यसको जस तत्कालीन कांग्रेस र कम्युनिस्टलाई जान्छ । तर, उनीहरूलाई आन्दोलनमा हिँडाउने सूत्रधार माथवरसिंह थिए । समाचारको शक्ति कति हुन्छ भनेर उनले त्यतिबेलै थाहा पाएका हुन् ।
अहिलेको राजनीति देखेर दिक्दार माथवर कहिलेकाहीँ सोचीबस्छन्, “यस्तो हुन्छ भन्ने थाहा पाएको भए म चुपचाप पञ्चायत हेरेर बसिरहन्थें ।”
नेपाली पत्रकारिताको लामो कालखण्डमा अमिट भएर कुदिएका माथवरसिंहले जे गरे, प्रजातन्त्रको सुदृढीकरणका लागि गरे । अनुहारमा बुढ्यौलीका धर्सा मुसार्दै उनले हामीलाई आफ्नो योजनाविहीन जिन्दगीको ‘सर्टकट’ कथा सुनाए——
बीपीकाे त्याे अन्तर्वार्ता
बुवा गणेशबहादुर बस्नेत जिल्ला पञ्चायतका सभापति थिए । बुवाले गर्ने भाषण उनले लेखिदिन्थे । ०२६ सालमा नगरकोट गाउँ पञ्चायतको उद्घाटन गर्ने कार्यक्रमपछि उनको कामै भाषण लेखिदिने भयो ।
नेता जगन्नाथ आचार्य प्रवासबाट फर्किएपछि सार्वजनिक रूपमा राजनीतिक कार्यक्रममा हिँड्न थालेका थिए । विषयवस्तुप्रति उनको विश्लेषण गर्ने क्षमताबाट प्रभावित भएका माथवरसिहंले उनैबाट राजनीतिको गुह्य कुरा थाहा पाए । राजनीतिप्रति आकर्षण जाग्यो । राजनीतिमा लागे ।
बीपी कोइराला लन्डन पुगेपछि बीबीसीमा अन्तर्वार्ता दिए । त्यो अन्तर्वार्तामा उनले भनेका थिए, “राजाले प्रजातन्त्रको अपहरण गरेर जनताको अधिकार खोसे, त्यसैले जनताको अधिकार फिर्ता गर्नुपर्छ । तर, गरेनन् । यत्रो वर्षसम्म पञ्चायतको नाममा राजाले प्रयोग गरे । उनले गर्न केही गर्न सकेनन्, त्यसैले फिर्ता गर्नुपर्छ । स्वाभाविक रूपमा २००७ सालको क्रान्तिबाट प्राप्त जनताको अधिकार फिर्ता गर्नुपर्छ । एउटी महिलाले स्वाभाविक रूपमा सन्तान जन्माउन सकिनन् भने डक्टरले अप्रेशन गरेर निकाल्छन् । त्यस्तै नेपालमा पनि राजाले स्वाभाविक रूपमा जनताको अधिकार फिर्ता गर्न मानेनन् भने हतियार उठाएर क्रान्ति गर्नुपर्छ ।”
बीपीको त्यो अन्तर्वार्तालाई लिएर नेपालमा चर्को विरोध भयो । बीपीको विरोध नगर्ने पञ्च नै हुँदैन भन्ने जस्तो भइसकेको थियो । तर, त्यही अन्तर्वार्ता सुनेपछि २००७ सालको क्रान्तिबारे पढेका मात्रै माथवरसिंहको युवा रगत उम्लियो । पञ्चायतविरोधी तत्कालीन कांग्रेसको अभियानमा सरिक हुने जोश झन् थपिएर आयो । बीपीको आह्वानलाई सहयोग कसरी गर्न सकिन्छ भनेर दिनदिनै छलफल शुरु भयो । बीपीलाई सघाउन बनारस को जाने, सशस्त्र क्रान्तिलाई कसरी सघाउने भनेर छलफल भइरन्थ्यो । त्यही छलफलमा सहभागीमध्येकै कसैले प्रशासनलाई सुराकी गरिदियो । माथवरसिंह ०२८ मंसिरमा भक्तपुरबाट पक्राउ परे । ०२९ को वैशाखमा छुटे ।
चार सहकर्मीलाई गाेली
०२९ सालमा नेविसंघको भक्तपुर शाखा खुल्यो । कृष्णप्रसाद भट्टराई (किसुनजी) उद्घाटन गर्न आए । भाषण गर्न थाले, “राजा वीरेन्द्रसँग बोल्ने ढंग पनि रहेनछन् । आफ्ना बाजेका पालाका नेता टंकप्रसाद आचार्यलाई तिमी भन्ने ? मैले टंकप्रसादजीलाई ‘तिमी भनेकोमा विरोध गर्नु भएन ?’ भनेर सोध्दा उहाँले ‘केटाकेटी नै छ, के विरोध गर्नु’ भन्नुभयो । केको केटाकेटी ? स्वास्नी सुमर्न सक्ने भएपछि केटाकेटी भन्न पाइन्छ ?”
त्यो भाषण गरेपछि किसुनजी पक्राउ परे । त्यसपछि नेविसंघले आन्दोलन चर्कायो ।
उदारवादी पञ्चको नेतृत्व गरिरहेका सूर्यबहादुर थापाले सिंहदरबार र नारायणहिटीबाट द्वेध शासन चलिरहेको भाषण गरेपछि उदारवादी पञ्चहरू पनि सरकारको विरोधमा बोल्न थालेका थिए ।
माथवरसिंह बनारस आउने–जाने गर्न थाले । बीपीसँगको भेटघाट र सामीप्यता बढेको थियो । बीपीले माथवरसिंहलाई हतियारको राजनीतिमा नलाग्न भन्थे । माथवरसिंह बीपीको विचार बोकेर गिरिजाप्रसाद कोइरालाको ‘एक्सन’ राजनीतिमा रमाइरहेका थिए ।
नेविसंघ नेता लीलानाथ दाहाल बनारस गएर फर्किंदै थिए । बनारसमा बनेको योजनाअनुसार काठमाडौंको प्रशासनलाई पनि क्रान्तिकारी स्वरूपमा तर्साउने योजना बनेको थियो । लीलानाथले बनारबाट आफ्नो गुन्टाभित्र पोको पारेको सिरानीभित्र ‘ह्यान्ड ग्रिनेड’ हालेर ल्याएका रहेछन् । त्यहाँ सुराकी लागिसकेको रहेछ । उनी थानकोट आउनुअघि नै प्रहरी कुरेर बसिरहेको रहेछ । प्रहरीले ‘ह्यान्ड ग्रिनेड’सँगै लीलानाथ, ठगीराज दाहाल, खगेन्द्र दाहाल र गोकर्ण कार्कीलाई पक्राउ गर्‍यो ।
त्यो बेला बन्द भइसकेको ‘राष्ट्रपुकार’ किसुनजीको आग्रहमा पुनः प्रकाशन प्रारम्भ भइसकेको थियो । केन्द्रीय कारागारमा रहेका किसुनजीले ‘हाम्रो आवाज नै बन्द भयो । प्रजातन्त्रवादीको विचार प्रवाह गर्न भए पनि ‘राष्ट्रपुकार’ चलाउनुपर्‍यो’ भनेपछि होमनाथ दाहाल, माथवरसिंहलगायतले पत्रिका निकाल्न थालेका थिए । पत्रकारिताको कखरा त्यहीँबाट शुरु गरे माथवरले । व्यवस्थापकको जिम्मेवारी पनि माथवरसिंहकै भागमा थियो ।
सीके प्रसाईं काठमाडौंबाहिर जान नपाउने शर्तमा जेलबाट छुटेका थिए । देवेन्द्र नेपाली भर्खर जेलमुक्त भएका थिए । अर्जुननरसिंह केसी छुटेर कलेज पढाउन थालेका थिए ।
लीलानाथलाई केन्द्रीय कारागारमा राखेर राजकाज मुद्दा चलाइँदै थियो । बीपीलाई भेट्न बनारस जाने नेपालीको संख्या दिनप्रतिदिन बढ्दै गएको थियो । बीपीलाई भेट्न जानेको संख्या बढ्नुको अर्थ पञ्चायतविरोधी आवाज बलियो हुँदैछ भन्ने सन्देश थियो । दरबार त्यसलाई निरुत्साहित गर्न चाहन्थ्यो । चाहे अनुरोध गरेर होस् या धम्क्याएर या तर्साएर नै किन नहोस् ।
“आतंक सिर्जना गरेर बीपीप्रति युवा आकर्षण र समर्थनलाई निरुत्साहित गर्न दरबारको योजनाअनुसार सेन्ट्रल जेलबाट नख्खु जेल सरुवा गर्ने बहानामा नख्खुको ओरालोमा लीलानाथ, ठगीराज, खगेन्द्र र गोकर्णलाई गोली हानेर मारियो,” माथवरसिंह आफ्ना सहकर्मीलाई पञ्चायतले सिध्याएको कथा सुनाउँछन् ।
घटनास्थल पुगेर त्यसको समाचार लेखे माथवरसिंहले । टंकप्रसाद आचार्यदेखि शीर्ष नेताहरूको प्रतिक्रिया छापे । त्यो समाचार दरबारलाई पचेन । दरबारको गतिविधि युवालाई ग्राह्य भइरहेको थिएन ।
प्रजातन्त्रसमर्थक युवा ‘यो बेला पनि हामी दरबारको हप्कीदप्की र आतंकबाट तर्सिने हो भने इतिहासले धिक्कार्छ’ भन्दै कांग्रेस नेतृत्वसामु पुगेको थियो । त्यसमा माथवरसिंह पनि थिए । बनारसमा बीपीले ‘दरबारलाई तर्साउन सशस्त्र आन्दोलनको हल्ला चलाउने तर हतियारै प्रयोग गरेर आंतककारी भने नहोऊँ’ भन्थे ।
“उहाँ (बीपी) काठमाडौंमा कांग्रेसले ठूलो हमला गर्दैछ भनेर हल्ला चलाउने तर हतियार नै चाहिँ नउठाउने भन्नुहुन्थ्यो । आक्रमण गर्ने तर प्रतीकात्मक मात्रै होस् भन्ने उहाँको भनाइ थियो । तर, हामी सहमत थिएनौं । हामीले प्लान गर्‍यौं तर त्यो पनि कार्यान्वयनमा जानुअघि नै सार्वजनिक भयो,” माथवरसिंह सम्झन्छन्, “विष्फोट गराउने योजना बनाएको आरोपमा हामीलाई पक्राउ गरियो । त्यसको मुख्य योजनाकारका रूपमा म ०३१ मा पक्राउ परें । म र जानकीप्रसाद कुइँकेललाई जन्मकैद भयो । ०३७ वैशाख १ गतेसम्म म जेल बसें ।”
नयाँ वर्षको अवसरमा राजाको बक्सिस स्वरूप उनी छुटेका थिए ।
नख्खु जेलमा किसुनजी, महेन्द्रनारायण निधि, बोधप्रसाद उपाध्याय, रामराजाप्रसाद सिंह, रामहरि जोशी, केपी ओली, आरके मैनाली, सीपी मैनाली, रामशरण महतलगायत पनि थिए ।
कम्युनिस्टहरुमा क्रान्तिको ज्वाला बढी नै थियो । एसएलसीसम्म पढेका कम्युनिस्ट नेताहरू ‘बुर्जुवा शिक्षा नपढ्ने’ भनेर पढाइ छोडी बसेका थिए । किसुनजी भने ‘पढ्नुपर्छ’ भन्थे । किसुनजीकै सल्लाहमा माथवरसिंह जेलमै बसेर पढिरहेका थिए । जेल तोडेर भागेका सीपी मैनाली फेरि समातिएपछि पढ्न थालेको माथवरसिंहलाई सम्झना छ । जेल परेपछि माथवरसिंहको पत्रकारितामा अल्पविराम लाग्यो ।
“सीपी मैनाली जेल तोडेर भाग्ने बेला कम्युनिस्ट नेताहरूबीच म र जानकीलाई पनि सँगै लैजाने छलफल भएको रहेछ । तर, अर्काथरी नेताहरूले कांग्रेसको नेतृत्व नै नेपाल फर्किसकेको र अब जेल तोडेर भागी इन्डिया बस्नुको अर्थ छैन भनेर तर्किएछन् । हामी भाग्न पाएनौं । यसको सबै योजना सीपी आफैंले बनाएका थिए,” माथवरसिंह सुनाउँछन्, “मैले जेलबाटै एमएको परीक्षा दिएँ ।”
०३७ वैशाख १ गते माथवरसिंह छुटे । वैशाख ४ गते धुलिखेलमा आमसभा थियो । बीपीले सम्बोधन गर्ने आसभाको मञ्चमा भर्खर जेलबाट छुटेका माथवरसिंह आकर्षणको केन्द्र थिए । त्यही मञ्चमा बीपीले माथवरसिंहलाई भने, “मैले भनेको नमान्दा दुःख पायौ हैन ?”
बीपीले माथवरसिंहलाई ‘पढेलेखेको मान्छे, सशस्त्र क्रान्ति गर्नु हुँदैन, अन्य तरिकाले आन्दोलनलाई सहयोग गर्नुपर्छ’ भनी सुझाव दिएका थिए ।
जेलमुक्त भएपछि माथवरसिंह कमलाक्षीस्थित पार्टी कार्यालय पुगेका थिए । बीपी, गणेशमान सिंह र किसुनजी सोफामा बसेका थिए । तीमध्ये किसुनजीले भने, “माथवरसिंह, तिमी लामो समय जेल बस्यौ । अब तराई घुमेर आउ एकपटक, रिफ्रेस पनि हुन्छ ।”
माथवरसिंहले सहमतिमा मुन्टो हल्लाए ।
बीपीले भने, “होइन, जति सक्छौ तिमी काठमाडौं उपत्यकाको काँठमा घुम ।”
गणेशमानले थपे, “हो । यतै घुम काँठमा ।”
माथवरसिंह भित्रभित्रै मुर्मुरिए बीपीसँग । जनमत संग्रह सकियो । नतिजा आउन बाँकी थियो । बीपीले माथवरसिंहलाई भने, “मैले काँठमै घुम भन्दा तिमीलाई चित्त बुझेको जस्तो लागेको थिएन । मैले किन त्यसो भनेको थाहा छ तिमीलाई ? तिमी नेता हुने मधेसको हो र ? यहीँको हो नि । भर्खर जेलबाट छुटेको मान्छेलाई हेर्न र कुरा सुन्न मान्छे व्यग्र थिए । त्यस्तो बेला तिमी यहाँ घुम्यौ भने सबैले चिन्छन् भनेर रोकेको हो ।”
माथवरसिंहको दिमागमा बत्ती बल्यो— ओहो ! बीपी त्यसै बीपी भएका होइन रहेछन् । आजीवन पार्टी नेतृत्व गरेका होइन रहेछन् ।
जनमत संग्रहको नतिजा आयो । बहुदल पराजित भयो । बीपीले माथवरसिंहलाई भने, “जनमत बहुदलका पक्षमा थियो । जनता हामीलाई जिताउन चाहन्थे तर पनि हामीले हा¥यौं, किन ? तराईका जिल्लामा गएर बुझेर आऊ ।”
माथवरसिंह झापादेखि पर्सासम्म घुमेर प्रोफेसर, डक्टर, वकिल, स्थानीय नेताका विचार बुझे । सुझाव आयो, “हाम्रो लिट्रेचर नै छैन । क्युनिस्टहरुसँग वैचारिक बहस चलाउने लिट्रेचर छ तर हामीसँग छैन । त्यसैले एउटा पत्रिका चलाउनु पर्‍यो । प्रजातान्त्रिक समाजवाद चाहिन्छ भन्ने तर यो भनेको के हो भन्ने हामीलाई नै थाहा छैन । प्रजातन्त्र पुनस्र्थापना नै किन ? पार्टी प्रतिबन्ध हट्यो भने के हुन्छ ? यसबारे नियमित रूपमा विचार आउने गरी पत्रिका निकाल्नु प¥यो । यो सन्देश बीपीलाई सुनाइदिनुपर्‍यो ।”
माथवरसिंहले त्यही सुझाव रिपोर्टका रूपमा तयार पारेर बीपीलाई बुझाए ।
एकदिन माथवरसिंह पार्टी कार्यालय पुगे । बीपी पार्टी कार्यालय पुगेर तनहुँको एक हाइस्कुलले निकालेको स्मारिका पढेर बसिरहेका थिए । माथरवरसिंहले भने, “हाइस्कुलका मान्छेले लेखेको पढेर बस्ने सभापतिज्यूले पनि ?”
बीपी रिसाएर रातो हुँदै भने, “तिमीले कसका लागि राजनीति गरेको ? तिमीले जुन बेला प्रजातन्त्र ल्याएर काम गर्छौ, त्यो बेला अहिले यो ९ कक्षामा पढ्दै गरेको यही विद्यार्थी देशको पोलिसी बनाउने ठाउँमा पुग्छ । अनि त्यो भोलि देशको पोलिसी बनाउने विद्यार्थी आज के सोच्दैछ भन्ने थाहै नपाई तिमी कसका लागि किन राजनीति गर्छौ ?”
रातोमुख लगाएर बस्नेबाहेक माथवरसिंहसँग कुनै उपाय थिएन । त्यो बेला नाजवाफ माथवरसिंह अहिले भन्छन्, “बीपी बीपी हुनुको एउटा अर्को पाटो थाहा पाएँ मैले त्यस दिन ।”
बीपी माथवरसिंहले दिएको रिपोर्टमा फर्किए, “तिमीले दिएको सुझाव त ठीक तर पत्रिका प्रकाशन गर्न गाह्रो छ । प्रकाशन गरेपछि त्यसलाई टिकाउन झनै गाह्रो छ ।”
वीरेन्द्र र बीपीबीच घम्साघम्सी
पञ्चायतले आफ्ना विरोधीलाई सकेसम्म बढार्न खोज्थ्यो । विरोधी आवाज बन्द गर्न खोज्थ्यो । पत्रिका प्रकाशनमा गिद्धेदृष्टि लगाएर बसेको थियो । प्रशासनले ‘राष्ट्रपुकार’लाई अपराधीहरूले अपराध लुकाउने अखडाका रूपमा बुझेको थियो, त्यसैले त्यो निकाल्न सम्भव थिएन ।
एकदिन हरि अधिकारीसँग सूर्यविनायकको चिया पसलमा संयोगवश भेट भयो । जेलबाट छुटेकोमा बधाई दिँदै सोधे, “अब के गर्नुहुन्छ ?”
लुकीलुकी राजनीति त भइरहेको थियो तर प्रजातन्त्र कहिले आउने र बहुदलीय राजनीति शुरु हुने— भविष्यको गर्भमै थियो । पत्रकारिता गर्न स्वतन्त्र वातावरण थिएन । पत्रिका दर्ता गर्नै कठिन थियो । हरिले भने, “अनुभव पनि छ, पत्रिका निकाल्नुस् ।”
माथवरसिंहले भने, “हामीलाई कसले दिन्छ पत्रकारिता गर्न ?”
हरिले हौस्याए र आश्वासन दिए, “म दिन्छु नि ! म त यहाँ भक्तपुरमा प्रशासक छु । पत्रिका दर्ता गर्नुस् ।”
माथवरसिंहले उत्तिखेरै उत्तेजित हुँदै भने, “हुन्छ ।”
“तर, एउटा शर्त छ,” हरिले संशय खडा गरिदिए ।
हरिले भने, “पत्रिका तपाईं आफैं चलाउनुस् तर दर्ता तपाईं आफ्नो नाममा गराउन पाउनुहुन्न ।”
माथवरसिंहलाई शर्त मञ्जुर भयो । माथवरसिंहले अरुसँग सल्लाह गरे ।
निकाल्ने निष्कर्ष निस्कियो ।
एउटा नाम लिएर उनीहरु सूचना विभाग पुगे । विभागले पत्रिकाको नाम जुधेको पत्र काटिदियो । माथवरसिंहले किसुनजीलाई सुनाए । किसुनजीले भने, “पुनर्जागरण नाम राख्नुस् न, भइगो नि ।”
नख्खु जेलमा हस्तलिखित पत्रिका निकाल्थे बन्दीहरू । त्यो पत्रिकाको नाम ‘पुनर्जागरण’ थियो । त्यो नाम किसुनजीले नै जुराइदिएका थिए । माथवरसिंहकी फुपू दमयन्ती बस्नेतको नाममा पत्रिका दर्ता भयो । ०३८ सालबाट माथवरसिंहको सम्पादकत्वमा ‘पुनर्जागरण’ मासिक प्रकाशन शुरु भयो ।
विमोचन बीपीले गर्ने कुरा भयो । तर, भक्तपुर कांग्रेसकै केही नेता गएर बीपीलाई सुनाए, “माथवरसिंहका पिता पञ्च हुन् । विमोचनमा जानुअघि एकचोटि विचार गर्ने हो कि ?”
बीपीले माथवरसिंहलाई चिठी लेखे, “मैले विमोचन गर्ने पत्रिका लिएर आऊ । विमोचनमा मैले पत्रिका र त्यसको कन्टेन्टबारे बोल्नुपर्छ । त्यसैले पत्रिका पनि पढ्नु प¥यो ।”
पत्रिका विमोचनका लागि बीपीलाई लिन माथवरसिंह आफैं पुगे । बीपीले भने, “ल, गणेशमानलाई पनि फोन गरेर बोलाऊ ।”
गणेशमानलाई फोन गरेपछि बीपीले भने, “किसुनीलाई पनि फोन गर ।”
“बीपीले त सबैसँग कुरा गरेर विमोचनमा सबै उपस्थित हुने चाँजोपाँजो मिलाइसक्नुभएको रहेछ । हामी आफैं छक्क पर्‍यौं,” माथवरसिंह सम्झिन्छन्, “त्यो हाम्रा लागि जिम्मेवारी सम्झिने हो भने भारी बोकिनसक्नु थियो ।”
‘पुनर्जागरण’ले पहिलो अंकमा किसुनजी, दोस्रोमा गणेशमान र तेस्रोमा बीपीको अन्तर्वार्ता छाप्यो ।
इन्डोनेसियाका कम्युनिस्ट नेता डीएन आइडिटले तत्कालीन राष्ट्रपति डा. सुकार्नोलाई प्रशंसा गरेर मख्ख पार्ने तर भित्रभित्रै घुसपैठ गरेर सत्ता कब्जा गर्ने सूत्र तयार पारेका थिए । त्यो सूत्र कार्यान्वयनको पहिलो दिन आठ जना कर्नेल मारिएका थिए । आधा घण्टामा राष्ट्रपति भवन कब्जा भयो । अस्पतालमा उपचार गराइरहेका एक जना जर्नेलले हेडक्वार्टर पुगेर स्थिति सम्हालेपछि बल्ल आइडिट सूत्र ‘फ्लप’ भएको थियो । त्यो ‘आइडिट फर्मुला’का रूपमा विश्वविख्यात थियो ।
‘पुनर्जागरण’मा माथरवरसिंहले ‘कम्युनिस्टले आइडिट फर्मुला प्रयोग गरेर दरबार र पञ्चायतलाई घेर्ने योजना बनाएको’ समाचार प्रकाशन गरे । त्यसपछि ०३९ देखि ०४५ सालसम्म पञ्चायतभित्र एकले अर्कोलाई शंकाको दृष्टिले हेर्न थाले ।
माथरवरसिंह जेलमै छँदा बीपीले ‘किङ इज रिसेप्टिभ’ भनेको समाचार भुसको आगोझैं सल्किएको थियो । ‘टाइम्स अफ इन्डिया’ले चार कोलममा समाचार छापेको थियो ।
एकदिन बीपीले फुसर्दमा भने, “ल, आज के सुन्छौ भन ।”
माथवरसिंहले भने, “तपाईंले ‘किङ इज रिसेप्टिभ’ भनेको समाचार आयो । हामीचाहिँ राजा र पञ्चायत ‘डिसेप्टिभ’ भएको भन्दै आक्रोश पालेर बसेका थियौं । त्यसकै कारण हामी जन्मकैद भोगिरहेका थियौं । हामीले यस्तो सजाय तिनै राजाबाट पाइरहेका बेला कसरी यस्तो भन्नुभयो ? आज सुन्ने हो ।”
बीपीले भने, “यसबारे धेरै कुरा आइसकेको छ । फेरि यसमै कुरा नगरौं ।”
माथवरसिंहले भने, “त्यो बेला हामी जेलमा थियौं । त्यसको कारण थाहा छैन । तपाईं भन्नैपर्छ ।”
बीपीले भने, “तिमी जेलमा थियौ है ? ल त्यसो भए सुन । पत्रकारलाई भनेको सधैंलाई काम लाग्छ, खेर जाँदैन । कुनै न कुनै बेला काम लाग्छ ।”
बीपीले राजा वीरेन्द्रलाई किन ‘रिसेप्टिभ’ भनेको भनेर सुनाउन थाले—
“म राजासँगै भेटेर कुरा गर्न चाहन्थें । तर, भेट भइरहेकै थिएन । नबोलाई भेट्न जाने कुरा पनि भएन । राजालाई बिन्तीपत्र हालेर भेट न त भन्ने सुझाव पनि आयो तर म बिन्तीपत्र हालेर भेट्न जान चाहिनँ । बीपीसँग भेट्नुपर्छ भनेर राजाले पनि फिल गर्नुप¥यो नि ! एकदिन एक व्यक्तिले मलाई भेटेर भने, ‘हजुरले सरकारलाई भेट गर्ने भन्नुभएको रहेछ । के कुरो बिन्ती गर्नुहुन्छ, मलाई भन्नुभयो भने म सरकारलाई जाहेर गर्छु ।’
राजालाई जे कुरो भन्नु छ, त्यो म आफैंले भन्नुपर्छ । किनभने मैले जे कुरा भन्नु छ, त्यो कुरा मैले तिमीलाई भनें भने तिमीले राजालाई भन्दै भन्दैनौ ।
ती व्यक्तिले सोधे, ‘किन भन्दिनँ ?’
मैले उसलाई भनें, ‘किनभने राजाको जुन पञ्चायती शासन व्यवस्था छ, त्यो व्यवस्थासँग तिम्रो निहित स्वार्थ छ । राजाको यो व्यवस्थासँग स्वार्थ छैन । किनभने पञ्चायत व्यवस्था नरहे पनि राजा राजा नै रहन्छन् । तर, पञ्चायत नरहे तिमीहरु जहाँ छौ र जुन पावर गेन गरिरहेका छौ, त्यो रहँदैन । त्यसैले मैले भनेको कुरा जस्ताको तस्तै तिमीले भन्दैनौ ।’
ती व्यक्तिले भने, ‘हजुरले मलाई चिन्नुभए जस्तो लागेन ।’
‘किन नचिन्नु ? तिमी रञ्जनराज खनाल हैन ?’
‘बनारसमा फलानो स्कुलमा पढेको होइन ?’
‘स्कुलमा तिम्रो लोकल अभिभावक किसुनजी हुनुहुन्थ्यो होइन ?’
‘तिमी राजाले नपठाई आएको हो ?’
मैले यसो भनेपछि उनी फर्किए । भोलिपल्ट साँझ साढे ५ बजे मलाई राखिएको पुलिस हेडक्र्वाटर, महराजगन्जमा डीआईजीसहित आएर भने, ‘दरबारबाट मुख्यसचिवज्यू आउँदै हुनुहुन्छ ।’
एकैछिनमा मुख्य सचिव आएर ‘सरकारबाट हुकुम भएको छ’ भन्दै लिएर गए । मलाई दरबारको बैठकमा लगेर राखे । राजा आएपछि अदबका साथ उठें । ‘बस’ भनेपछि कुराकानी शुरु भयो । अवस्था यस्तो आयो कि भद्र भएर बिस्तारै बोल्ने राजाको स्वर मैले नसुन्ने, मेरो त यसै पनि स्वर सानो, राजाले नसुन्ने । ओठ चलेको देखिने तर नसुनिने । राजा उठेर मेरो नजिक बसेपछि सजिलो भयो ।
मैले भनें, ‘सरकार ! म प्रष्ट कुरा राख्छु । प्रष्ट कुरा राख्दा सरकारलाई रुचिकर नलाग्न पनि सक्छ । रिसाइबक्सियो भने सरकारले के–केन गरिबक्सन्छ भन्ने डर छैन मलाई । पाउनुपर्ने गोत मैले पाइसकें । होइन, सरकार खुशीमात्रै हुने कुरा गरौं भने सरकार खुुशी भएर बक्सने कुरा सबैभन्दा ठूलो प्रधानमन्त्री पद हो । प्रधानमन्त्री म भइसकें । सरकारबाट प्रधानमन्त्री बनाइबक्सन चाह्यो भने पनि म हुन्न । जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री भइसकेको मान्छे मनोनीत प्रधानमन्त्री हुन्न । त्यसैले मलाई लोभ पनि छैन र डर पनि छैन । त्यही भएर स्पष्ट कुरा राख्छु । यसरी प्रष्ट कुरा अरुले पनि राख्छन् ?’
राजाले भने, ‘कसै–कसैले त राख्छन् तर धेरैले राख्दैनन् ।’
हाम्रो कुरा शुरु भयो । म बोलिरहेको थिएँ । राजा रिसाएर रातो मुख लगाए । सोफाबाट जुरुक्क उठेर भने, ‘डु यु नो विथ हुम यु आर टकिङ टु ? यु आर टकिङ टु द किङ अफ नेपाल ।’
म पनि अदबसाथ उठें र भनें, ‘सरकार मलाई पूरा अनुभूति छ, म नेपालको महाराजधिराजसँग कुरा गर्दै छु । तर सरकार ! सरकारलाई पनि यो अनुभूति हुनुपर्छ कि सरकार अहिले नेपालको राजनीतिज्ञसँग कुरा गरिबक्सिँदैछ ।’
यति भनेपछि राजा बसे र डेढ घण्टासम्म हाम्रो कुराकानी भयो । मेरो मान्यता के छ भने मेरो कुराले जो मान्छे रिसाएर उत्तेजित हुन्छ र रिसाउँछ, त्यो मान्छे कन्भिन्स पनि हुन्छ ।
मैले तीन जना राजासँग संगत गरें । भागेर इन्डिया गएका बेला राजा त्रिभुवनले फिर्ता ल्याएको हुँदा त्यो कृतज्ञभाव जहिले पनि मप्रति रह्यो । र, त्यहीअनुसार व्यवहार गर्थें । त्यही भएर उनले कहिल्यै पनि मसँग बहस गरेनन् । राजा महेन्द्र ठीक आधा घण्टापछि उल्टो काम गर्ने भए पनि मसँग कहिल्यै बहस गर्दैनथे । यी (वीरेन्द्र) राजाचाहिँ बहस गर्ने । बहस गर्ने मान्छे कि मसँग उनी कन्भिन्स हुन्छन् कि उनले मलाई कन्भिन्स गर्छन् । त्यसैले यो बहस गर्ने स्वभाव प्रजातान्त्रिक गुण हो । त्यसैले मैले किङ इज रिसेप्टिभ भनेको हुँ ।”
यही कुरा माथवरसिंहले ‘एकछिन बीपीसँग’ भनेर प्रकाशन गरे । त्यसपछि ‘आइडेट फर्मुला’ छापे । प्रशासनको आँखा ‘पुनर्जागरण’मा परिहाल्यो— राजा भएको मुलुकमा राजा रिसाएपछि बीपीले राजालाई थच्याउने ? ल ठीक छ, कोठाभित्र त जे भयो भयो । त्यही कुरा माथवरसिंहले लेखेर सार्वजनिक गर्ने ?
माथवरसिंह पक्राउ परिहाले । चार महिना जेल सजाय तोकियो । ‘पुनर्जागरण’को दर्ता खारेज गरियो । चार अंक निस्किएपछि पत्रिका खारेज भयो ।
नख्खु जेलमा राखिएको थियो माथवरसिंहलाई । त्यहीँ उनले एकदिन बीपीको अन्तर्वार्ता सुने । बीपीले ‘आइडिट फर्मुला’को कुरा उठाउँदै भने, “आइडिट फर्मुला कति प्रभावकारी रहेछ भन्ने कुरा प्रमाणित फेरि भएको छ । मेरो अन्तर्वार्ता छाप्ने पुनर्जागरण पत्रिकाका सम्पादक माथवरसिंह आज जेलमा छन् । मेरो अहिलेको मेलमिलापको विचारले राजालाई सहयोग पुग्छ । राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिमा पनि राजालाई बल पुर्‍याउने पत्रिकामाथि कारबाही गरेर माथवरलाई थुनियो । राजालाई राम्रो हुने कुरा मन नपराउने मान्छे त पञ्चायतभित्रै रहेछन् नि, त्यसको प्रमाण हो यो ।”
अन्तर्वार्ता सुनेर माथवरसिंहका आँखाबाट तरक्क आँसु चुहियो ।
दुई महिनापछि जेलमुक्त भएका माथवरसिंह भोलिपल्टै बीपीलाई भेट्न गए । पत्रिका र त्यसको समाचारले पारेको प्रभावको कुरा भयो । ‘आइडिट फर्मुला’को चर्चा भयो । त्यहीँ बीपीले छोरी चेतनाको विवाहको रिसेप्सन निम्तो दिए । त्यही साँझ बीपीलाई रोगले च्याप्यो । अस्पताल भर्ना गरिए । अवस्था सामान्य भएन, दिल्ली लगियो । त्यहाँबाट बैंकक लगिएका बीपीलाई नेपाल ल्याइयो । त्यसपछि बीपी राम्रोसँग बोल्नै नसक्ने अवस्थाबाट फेरि सामान्य अवस्थामा कहिल्यै फर्किएनन् ।
नेता जगाउने समाचार
सूर्यबहादुर थापा प्रधानमन्त्री हुँदा उनका राजनीतिक सल्लाहकार सुरेन्द्रराज शर्मा हरि अधिकारी भेट भएकै चिया पसलमा भेट भए । ०४० मा उनले नयाँ पत्रिका दर्ता गरेर चलाउन सुझाव दिए । ‘राष्ट्रिय पुनर्जागरण’ नाम राखे । ०४५ सालमा कमल थापा सञ्चारमन्त्री भएका बेला ‘पुनर्जागरण’ नाम राखेर पुनः प्रकाशन गर्न अनुमति दिए । फेरि ‘पुनर्जागरण’ले प्राण पायो । प्रकाशन शुरु भयो, त्यो पनि साप्ताहिकका रूपमा ।
पञ्चायत ३० वर्षमा प्रवेश गरिसकेको थियो । कांग्रेस आन्दोलन गर्ने हुंकार त गथ्र्यो तर मान्छेले भन्न थालिसकेका थिए, “यसले भन्न त भन्छ तर गर्ने केही होइन ।”
उता, कम्युनिस्टले क्रान्ति गर्छ भनेर पनि कसैले पत्याउँदैनथे । उनीहरू दुई दर्जन चिरामा विभाजित थिए ।
गणेशमान इमान्दार नेताको छबी बनाएर राष्ट्रिय राजनीतिमा सक्रिय थिए । गणेशमानले केही गर्न नसक्लान् तर राष्ट्रलाई व्यक्ति र दलको निहित स्वार्थका लागि धोका दिँदैनन् भन्नेमा सबैको विश्वास थियो ।
गणेशमानलाई मान्न कुनै पनि कम्युनिस्ट नेतालाई आपत्ति थिएन । उनीसँग माथरवरसिंह नजिक थिए । दिनकै भेट हुन्थ्यो । ‘गणेशमानका पानाहरू’का लागि हप्तामा तीन दिन रेकर्ड गर्थे ।
माथवरसिंह कुराकानीमा बेलाबेला बहकिन्छन्, नोस्टाल्जिक हुन्छन् । आपसी सम्बन्धका कुरा सुनाउँछन् । प्रत्येक दिन साँझ गणेशमान दुई पेग रक्सी पिउँथे । तर, उनी कहिल्यै विदेशी रक्सी पिउँदैनथे । आफ्नै दिदीले बनाएको रक्सीमात्रै पिउँथे । उनलाई साथ दिनेमा एक माथवरसिंह पनि हुन्थे । माथवरलाई पनि गणेशमानको संगतले दुई पेगको आदत लाग्यो । दुई पेगभन्दा धेरै त्यसपछि माथरवरसिंहले पिएनन् ।
कांग्रेस र कम्युनिस्टले आन्दोलन गर्छु भन्दा जनताले पत्याउन छाडिसकेका थिए । कांग्रेसले सत्याग्रह सञ्चालन गर्ने निर्णय पारित गरे पनि गिरिजाप्रसाद कोइराला राजासँगको भेटपछि ‘विकल्प खोज्नुपर्छ’ भन्दै हिँड्न थालेका थिए । यसपछि कांग्रेसभित्रै उनको चर्को आलोचना भइरहेको थियो । गणेशमानप्रति भने कांग्रेस र कम्युनिस्ट दुवैले विश्वास गर्थे ।
यो अवस्था माथवरसिंहले नजिकबाट नियालिरहेका थिए । “गणेशमान पनि आन्दोलन गर्नुपर्छ त भनिरहनुहुन्थ्यो तर त्यसलाई कसरी मूर्तरूप दिने भन्ने ठोस कार्ययोजना भने उहाँसँग थिएन,” माथवरसिंह ०४५ सालमा फर्किए ।
पत्रिका निकाल्न हरेक हप्ता नयाँ स्टोरी चाहिन्थ्यो । गणेशमानको आह्वानमा कांग्रेस र कम्युनिस्ट मिलेर देशमा आन्दोलन हुने भनेर माथवरसिंहले समाचार लेखे । त्यो बेला उनको पत्रिकामा राजनीतिक समाचार लेख्ने गोविन्द अधिकारी, अनारसिंह कार्की, सरोज मिश्रलगायत थिए । उनले तयार पारेको समाचारमा सबैभन्दा पहिला अविश्वास प्रकट गर्दै गोविन्दले भने, “ए माथवरजी, कांग्रेस र कम्युनिस्ट मिलेर आन्दोलन गर्ने भनेर त समाचार लेख्नुभयो । पढ्दा र सुन्दा हो जस्तो पनि लाग्छ । तर, यो कांग्रेसले गरिखाँदैन ।”
गणेशमानलाई थाहै नदिई, नसोधी समाचार छापियो । माथवरसिंह आफूलाई शरदसिंह वस्तीले भनेको सुनाउँछन्, “माथवरजीले लेखेको समाचार छापिएपछि गणेशमानजीले के बोलेछु भनेर थाहा पाउनुहुन्छ ।”
समाचार छापिएको बेलुका गणेशमानको घर पुगे माथवरसिंह । उनलाई गणेशमानले भने, “हैन के लेख्यौ तिमीले ? मलाई त सोधेर हैरान लाइसके त ।”
“यसको प्रभाव एकदम राम्रो परेको छ । जनमत सिर्जना हुँदैछ,” माथवरसिंहले आश्वस्त पार्ने प्रयास गरे ।
गणेशमानले भने, “लेखेको त ठिकै हो, आन्दोलन पनि गर्नैपर्छ । ०१७ सालपछि राजाले हामी प्रजातन्त्रवादीलाई कम्युनिस्टको लठ्ठी लिएर हिर्काइरहेका छन् । त्यो लठ्ठी खोसेर त्यही लठ्ठीले राजाको थाप्लोमा नहानेसम्म आन्दोलन हुँदैन ।”
माथवरसिंहले सहाना प्रधानसँग भेट भएको र उनले भेट्न चाहेको सुनाए । गणेशमानले पनि भेट्ने समय मिलाउन भने ।
अर्को अंकका लागि पनि नयाँ समाचार चाहियो । गणेशमानको नजिक माथवरसिंह नै थिए । उनले समाचार लेखे, “कांग्रेस र कम्युनिस्टका शीर्ष नेताबीच भेटघाट शुरु भयो । गणेशमानले कम्युनिस्ट नेताहरूको विचार बुझेर कसरी आन्दोलन गर्ने भन्ने सल्लाह गरिरहेका छन् ।”
यो समाचार छापिँदासम्म गणेशमानसँग कसैको पनि भेटघाट भएको थिएन । जबर्जस्ती समाचारले आन्दोलनका लागि तयारी गर्न कांग्रेस र कम्युनिस्टलाई दबाब सिर्जना गरिरहेको थियो ।
कम्युनिस्ट नेताहरूलाई नभेटी समाचार लेख्दा त्यसको सत्यतामा प्रश्नचिन्ह खडा हुने भएपछि माथवरसिंह आफैं सहानालाई भेट्न गए । गफगाफमा गणेशमानसँग भेट्न आफूलाई आपत्ति नभएको बरु समय अनुकूल मिलाएर आफूलाई खबर गर्न भनिन् । दुई दिनपछि भेट भयो ।
अर्को अंकका लागि समाचार तयार भयो— कांग्रेस र कम्युनिस्ट नेताहरूको भेटघाटको क्रम बाक्लियो । भेट आन्दोलनका विषयमा केन्द्रित छ ।
नेविसंघ र अखिलबीच पनि विश्वविद्यालयमा भेट भयो भन्ने समाचार लेखे ।
“त्यसपछि आन्दोलनको तयारी कहाँ पुग्यो भनेर कार्यकर्ता तथा जनताले नेताहरूलाई सोध्न थाले । अन्य पत्रिकाले पनि नेताहरूलाई सोध्न थाले । उनीहरूलाई पनि गणेशमान सिंह र किसुनजीले ‘हो’ भन्दिनुभयो,” माथवरसिंहले हाँस्दै सुनाए ।
आरके मैनाली उनलाई भन्थे, “माथवरजी ! समाचार त लेख्नुभयो तर खोइ, भेटघाटै भएको छैन त ! पत्रकारले प्रश्न गर्दा के भन्ने ? भेट भयो भनौं भने भएको छैन । भएन भनौं भने भयाे भन्ने समाचार अाइसक्याे, अप्ठ्यारो पो पर्‍यो त !”
त्यसपछि बाध्य भएर नेताहरू छलफलमा जुटे । कम्युनिस्टका सबै घटक गणेशमानलाई आन्दोलनको सर्वोच्च नेता मान्न तयार भए । आन्दोलन शुरु भयो ।
त्यो आन्दोलनले पञ्चायत ढाल्यो । माथवरले ठाने— मेरो जीवन सार्थक भयो ।